ब न्दुक बोकेर सेल्फी खिच्दा गयो बेहुलीको ज्यान ? – Dainik Sangalo
ब न्दुक बोकेर सेल्फी खिच्दा गयो बेहुलीको ज्यान ?
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन ३१, २०७८ समय: १३:२०:०७
युवतीको विवाह दुई महिना अघि मात्र भएको थियो । उनले ब न्दु क लिएर सेल्फी खिच्दै थिइन् । त्यही बेलामा दुर्घटनामा युवतीको मृ,त्यु भयो । उनको मृ,त्युपछि युवतीको ब न्दु क लिएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । यो घटना उत्तर प्रदेशको हरदोई जिल्लामा भएको हो ।
तस्बिर खिच्ने क्रममा गो, x ली ला, x गेर एक महिलाको नि,धन भयो । तर उनका माइती पक्ष यो कुरा मान्ने अवस्थामा छैनन् । माइती पक्षले घटना दाइजोका कारण भएको बताउँदै आएका छन् । घटना पछि मात्र युवतीको तस्बिर उनका परिवारका सदस्यले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका थिए । जसमा युवती ब न्दु कको साथमा देखिएकी छन् ।
असावधानीका साथ ब न्दु क प, x ड्कि, एर युवतीको नि, धन भएको उनका श्रीमान तर्फका परिवारका सदस्यको दावी छ । विवाहित महिलाका माइतीले दुई लाख रुपैया दाइजो कम भएका कारण घटना भएको आ,रोप लगाएका छन् । प्रहरीले ४ जना नाम नखुलेका र थुप्रै अ, x ज्ञात बि,रुद्ध मु द्दा दर्ता गरेको छ।
युवतीको बुबाको उजुरीको आधारमा प्रहरीले एफआईआर दर्ता गरेको छ। यो आरोप छ कि ससुराले दाइजो मा २ लाख नगद माग्दै थिए। युवतीको विवाह दुई महिना अघि मात्र भएको थियो। युवतीका पति, ससुरा, सासु र सासुको बि,रुद्ध एफआईआर दर्ता गरिएको छ। घटनाको अनुसन्धान भैरहेको प्रहरीले जनाएको छ। ससुराल पक्षको बयान पनि जाँच गरिनेछ।
Last Updated on: August 15th, 2021 at 1:20 pm